February 12, 2021 - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home 2021 Feb 12
चेलीहरु सुरक्षित रुपमा हिँडडुल गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै कांग्रेसको प्रदर्शन
काठमाडौं । बैतडीकी १७ बर्षिया किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कार र हत्या गर्नेलाई कारबाही माग गर्दै नेपाली काँग्रेस सुनसरी काठमाडौं सम्पर्क समितिले माग गरेको छ...
यस्ताे छ प्रियंका चाेपडा र निक जाेन्सकाे प्रेमकथा
मुम्बई । प्रियंका चोपडा र निक जोन्स बलिउडका सबै भन्दा चर्चित जोडी मानिन्छन् । उनीहरुले २ डिसेम्बर २०१८ मा हिन्दु र क्रिश्चियन परम्परा अनुसार...
सिन्धुली । के तपाई टेम्पु चढ्दै हुनुहुन्छ ? खल्तीमा पैसा छैन ? यदि छैन भने पनि तपाईं चिन्ता नगर्नुहोस, सिन्धुलीमा अटो चढ्नप-यो भने बैंकबाटै...
जुम्लामा दक्षिण एसियाकै नमुना स्याउ बगैंचा
जुम्ला । जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका वडा नम्वर ५ कुम्डीको जलजलामा १३ करोड लगानीमा फुजी स्याउ खेती सुरु गरिएको छ । दक्षिण एसियाकै नमुना स्याउ...
पर्ख र हेरको स्थितिमा ठूला ब्यानरका चलचित्र
काठमाडौं । निर्माता निर्देशक सुदर्शन थापाले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु–२’ लाई आगामी नयाँ वर्षको अवसर पारेर प्रदर्शनी गर्ने तयारी गरिरहेका थिए...
पर्सामा बालुवा तस्कर र सशस्त्र प्रहरीबीच झडप, दुई प्रहरी जवान घाइते
काठमाडौं । पर्सामा सशस्त्र प्रहरी र बालुवा तस्करबीच झडप भएको छ। बालुवा तस्करी भइरहेको सूचनाका आधारमा पुगेको सशस्त्र प्रहरी टोली र तस्करबीच झडप भएको...
आज सोनाम ल्होसार, विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै
काठमाडौं । तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम ल्होसार अर्थात् नयाँ वर्ष पर्व आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । मञ्जुश्री पात्रोअनुसार आजदेखि...
कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्नुपर्छ
संसद् विघटनसँगै ताजा जनादेशका लागि प्रम ओलीद्वारा चुनावको घोषणा भएपछि तात्कालीन संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस स्पष्ट धारणा बनाएर अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।...
काठमाडौं । सरकारले पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित पूर्वविशिष्ट व्यक्ति(भीआईपी)ले कार्यविधिविपरीत राख्दै आएका सुरक्षाकर्मी धमाधम फिर्ता गर्न थालेको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्व विशिष्टको सुरक्षाका लागि खटाइने सुरक्षाकर्मीबारे...